Khabar Break - राजाराम स्याङ्तान बिरुद्ध इन्द्र बानीया –कस्को पल्ला भारी ? यस्तो छ अवस्था
राजाराम स्याङ्तान बिरुद्ध इन्द्र बानीया –कस्को पल्ला भारी ? यस्तो छ अवस्था
आउँदो मंसीर २१ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि हिजो कार्तिक १६ गते मनोनयन दर्ता सम्पन्न भैसकेको छ । मकवानपुरमा रहेको दुई वटा प्रतिनिधिसभा तथा ४ वटा प्रदेसभामा मकवानपुरका ६८ जनाले उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् ।
यो पटक मकवानपुरको दुबै प्रतिनिधिसभाको चर्चा त छदैछ त्यो संगसगै प्रदेशसभाको पनि उत्तिकै चर्चा छ । यो पटक सबैभन्दा धेरै चर्चा भने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नंबर २ अन्र्तगतको प्रदेशसभा (ख) को रहेको छ । जहा दुबै निवर्तमान सांसदहरु चुनावी मैदानमा छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका इन्द्रबहादुर बाँनीया र एमाले नेता राजाराम स्याङ्तानबिचको भिडन्त रोचक हुने संभावना देखिएको छ ।
मनोनयन दर्ताको अन्तिम समयसम्म मकवानपुरको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नंबर १ बाट प्रत्यक्ष उम्मेद्वार बन्ने हल्ला गरेका बाँनीया आखिर उनको क्षेत्र छाडेर क्षेत्र नंबर २ अन्र्तगतको प्रदेशसभा (ख) मा उम्मेद्वार बन्न पुगे । लोकतान्त्रिक गठबन्धनको कारण कमल थापालाई आफ्नो क्षेत्र छोकेका बाँनीयाको प्रवेशपछि उक्त क्षेत्रको भिडन्त रोचक बनेको हो ।
बाँनीयाको प्रवेशपछि यो क्षेत्रमा चुनावी गफगाफ अझ बढने भएपनि उत्त क्षेत्रमा विजयी हुनभने बाँनीयालाई जति असहज छ त्यतीनै वाम गठबन्धनको लागि सहज हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका, राक्सीराङ गाउँपालिका, कैलाश गाउँपालिका तथा हेटौँडा उपहानगरपालिकाको ३ र १९नंबर वडा रहेको उक्त क्षेत्रमा वाम गठबन्धनकै पल्ला भारी देखिन्छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा आएको मत परिणामलाई विश्लेषण गर्ने हो भने वाम गठबन्धनका स्याङ्तानले सहज विजय प्राप्त गर्ने देखिन्छ ।
गत बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा मनहरी गाउँपालिका, कैलाश गाउँपालिका तथा हेटौँडाको ३ र १९ मा एमाले विजयी भएको थियो भने राक्सीराङ गाउँपालिकामा भने कांग्रेस बिजयी भएको थियो । उक्त निर्वाचन परिणामलाई हेर्दा मनहरीबाट एमालेले र माओवादीको गठबन्धनले ७ हजार ४ सय ९७ मत प्राप्त गर्दा कांग्रेस र राप्रपाको गठबन्धनले भने ५ हजार १ सय ५५ मत प्राप्त गरेको थियो । त्यसैगरी कैलाश गाउँपालिकामा वाम गठबन्धनले ५ हजार १ सय ३७ मत प्राप्त गर्दा लोकतान्त्रिक गठबन्धनले २ हजार ७ सय ९४ मत ल्याएको थियो । त्यसैगरी राक्सीराङ गाउँपालिकामा वाम गठबन्धनले ५ हजार ९ मत ल्याउदा लोकतान्त्रिक गठवन्धनले ३ हजार ६ सय ३१ मत प्राप्त गरेको थियो । उक्त प्रदेश अन्र्तगत पर्ने हेटौँडाको वडा नंबर ३ मा वाम गठबनधनले १ हजार ३ सय ३२ मत ल्याउँदा लोकतान्त्रिक गठबन्धनले ९ सय ४३ मत ल्याएको थियो । त्यस्तै वडा नंबर १९ मा वाम गठबन्धनले ९ सय ७ मत ल्याउदा लोकतान्त्रिक गठबन्धनले १ हजार ९४ मत प्राप्त गरेको थियो ।
समग्रमा हेर्दा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नंबर २ अन्र्तगतको प्रदेशसभा (ख) मा वाम गठबन्धनले १९ हजार ८ सय ८२ मत प्राप्त गर्दा लोकतान्त्रिक गठबन्धनले १३ हजार ६ सय १७ मत प्राप्त गरेको थियो भने मतान्तर ६ हजार २ सय ६५ रहेको थियो । यसरी हेर्दा उक्त क्षेत्रमा वाम गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका एमालेका राजाराम स्याङ्तानको जित सुनिश्चित देखिन्छ ।